Maxaa taariikhdu qarinaysaa astaanta Doritos | Hal-abuurka khadka tooska ah
Iris Gamen | 26/03/2022 21:00 | Design Graphic
Waxaan rajeyneynaa inaad sidoo kale tahay mid naga mid ah oo aad dareento jaceyl aan shuruud lahayn oo ku wajahan Doritos. Hubaal, waxaad furtay boorso markaad daawato TV, ciyaareyso ciyaaraha fiidyaha, cunto-cunto ahaan xaflad, iwm. Munaasabad kasta ayaa wanaagsan inaad ku raaxaysato cuntooyinkan fudud.
Chips Tortilla ayaa horumaray waqti ka dib, isla dariiqa ayaa raacay sawirka astaanta. Waxaan uga hadli doonaa arrintan daabacaadan, oo ku saabsan horumarinta astaanta Doritos iyo waxa u horseeday.
Summada fudud, oo ay leedahay kooxda Pepsico Food ee Spain, dhowr jeer ayey beddeshay muuqaalkeeda si ay u soo bandhigto shakhsiyad cusub macaamiisheeda. Shakhsi sumad leh oo muujisa tamar, casriyeyn iyo tacabur, kaas oo lagula xidhiidho dadweynaha da'da yar.
Doritos, sida aynu wada ognahay, waa cunto fudud tortilla galley oo saddex xagal u eg oo lagu daray farmaajo, basbaas, iyo walxo kale. Sanadihii la soo dhaafay, astaanta ayaa balaadhinaysay suuqa oo soo saartay dhadhan cusub.
1 Taariikhda Doritos
2 Taariikhda astaanta Doritos
Doritos, ayaa leh Asal ahaan sannadkii 1914-kii, magaalada Indianapolis, halkaas oo uu ku noolaa aasaasihii Arch Clark West. Markii uu yaraa, Arch aabbihii si lama filaan ah ayuu u dhintay, hooyadiina way awoodi wayday inay keligeed koriso.
Xaaladdan oo dhan waxay keentay in walaalaha loo kaxeeyo guriga korinta, Indiana Masonic Home, halkaas oo ay ku qaateen dhowr sano oo noloshooda ah.
Sannadkii 1961, waa ku xigeenka shirkadda Frito, waa qayb ka mid ah cuntooyinka fudud ee Pepsico iyo Frito-Lay. Mid ka mid ah safarradii qoyska ee ay qaadan jireen, Archibal West waxay ogaatay in mid ka mid ah baararka waddada dhinaceeda ah ee ay ku istaageen, ay u adeegi jireen cunto ay la socdaan xabbado galley ah oo tortilla ah.
cunt Fikirkan madaxiisa ku jira, wuxuu u tagay shirkadiisii ​​oo uu u soo bandhigay. Laakiin xaaladda dhaqaale ee shirkadda awgeed, waa la fulin kari waayay.
Muddo ka dib, laba shirkadood oo muhiim ah ayaa midoobay, iyo sanadka 1964, soo saarista cuntooyinka fudud ee Archibal West ay soo jeedisay ayaa bilaabmay, iyada oo la raacayo magaca Doritos.
Magaca Doritos, wuxuu leeyahay a asal ahaan la xidhiidha habka wax soo saarka ee alaabta. Meesha galleydu marto marxaladda browning, yacni, cunto karinta oo aan shiilan, ereygan, browning, waa dhismihii, bunni dahab ah.
Taariikhda astaanta Doritos
Astaantii ugu horreysay waxay soo baxday 1964-kii, tan iyo markaas waa ay isbedeshay ilaa ay awood u yeelato in ay sawirto jaantuska saddex-geesoodka ah ee calaamadeeda.
La taariikhda astaantan waxa jira kuwa u kala qaybiya laba weji, wajigii kowaad 1964kii, kaas oo aan ka helno sumadda ka kooban afar geesood iyo kuwa wajigii labaad 1994kii, kaas oo saddexagalka mar hore la bilaabay in la isticmaalo.
El Calaamadda ugu horreysa ee calaamadda, waxaa la sameeyay 1964, taas oo loo adeegsaday 3 midab diiran, jaalle, casaan iyo oranji. Xarfaha uu ka kooban yahay magaca astaanta ayaa mid walba lagu dhejiyay leydi midab leh oo ka kooban qoraal-gacmeedyo iyo xariijimo qalloocan.
Astaantan waxa la hayaa ilaa 9 sano waana ku jirtaa 1973, markii calaamaddu ay soo bandhigtay dib-u-qaabaynteedii ugu horreysay, kaas oo ay ku jireen midabyo ka duwan kii hore.
Xaaladdan oo kale, the midabada ayaa noqda mid dhexdhexaad ah, sida huruud ah oo cajiib ah hadda lama isticmaalo. Asalkii hore ayaa wali ahaa leydi midab leh, kaas oo ka kooban xaraf magaca summada dhexdeeda ah.
Calaamaddan laga soo bilaabo 1973, waxaad arki kartaa sida midabka shukulaatada loo bilaabay in loo isticmaalo magaca astaanta. Qoraal-qoraalka ayaa la is-waafaqay, taasoo keentay dheeli tirnaan qaraabo ah, tan iyo markii ay sii waday inay ilaaliso summaynta aad u yar.
Sannado ka dib, in 1979-kii, nashqada summada ayaa isbeddel ku yimid, leydiyadii ka koobnaa asalka ayaa hadda la jaanqaadi waayay xarfaha., laakiin way u janjeersadeen. Si aan magaca calaamaduhu u noqon meel ka baxsan, waxaa la go'aamiyay in la yareeyo booska u dhexeeya jilayaasha.
Inta u dhaxaysa sannadaha, 1985 iyo 1994, oo la isticmaalay markii ugu dambeysay, sumadda oo ka kooban leydi asalkeeda. Magaca astaanta ayaa noqda mid weyn oo midab madow ayaa loo adeegsadaa xarfaha, marka lagu daro dulmar cad.
Haddii aan si dhow u eegno, the barta Laatiinka i, ayaa wax laga beddelay si loo dhigo saddex xagal, oo tilmaamaysa qaabka tortilla galleyda.
Midabada la isticmaalay, ayaa mar kale ah codad cajiib ah, oo ku ciyaaraya jaale dhalaalaya iyo casaan liimi ah daran. Isla markaana, waxa la arki karaa in tirada leydi ee la isticmaalay laga dhigay shan.
Dhexda 90, naqshadda ugu horreysa ee calaamaddu waxay u muuqataa qaab saddex xagal ah, oo horeba u ahaa astaanta astaanta. Magaca, dulmar jaale ah ayaa u muuqda, barta i weli waa la ilaaliyaa, qaab saddex xagal ah.
Dhamaan magaca summada, wuxuu u muuqdaa inuu weheliyo qaab saddex xagal jaale ah, la dhigay gunta hoose ee halabuurka, oo tilmaamaysa cunto fudud. Dusha sare ee saddexagalka jaalaha ah, waxaa jira qaab aan caadi ahayn oo casaan ah, kaas oo hoosta ka xariiqaya magaca astaanta, isagoo xoogga saaraya.
Sanadihii la soo dhaafay, calaamaddu waxay go'aansataa inay isbeddel cusub ku siiso muuqaalkeeda. Astaanta waxa lagu dhex dhisay leydi madow, oo leh geeso aan sinnayn. Magaca astaanta ayaa sidoo kale lagu sameeyay isbeddel midab, oo ka yimid madow ilaa caddaan.
Qaabkan, curiye cusub ayaa la soo bandhigay, waana weedha, chips galleyda, taas oo soo jiidata indhaha daawadayaasha iyadoo la adeegsanayo midab huruud ah oo firfircoon.
Sanadihii 2000, asalka leydigu gabi ahaanba wuu baaba'ay, isagoo fursad u siinaya saddex xagal madow. Qaab-dhismeedkan joomatari waxaa lagu xaddiday saddex xariiq oo saddex xagal ah oo midabo kala duwan leh, buluug, caddaan iyo madow. Ma aha oo kaliya midabada kala duwan, laakiin sidoo kale dhumucda xariiqda, taas oo bixisay asymmetry ee halabuurka.
Shan sano kadib, 2005, Doritos waxay ku samaysay isbeddel xag-jir ah sawirka astaanta. Noocani wuxuu ka soo muuqday oo keliya khaanadaha dukaamada ee Maraykanka. Astaantu waxay dooratay weji nooca sans serif ah iyo ciyaarta midabada cad iyo cawliga, oo leh astaamo guduudan oo jilayaal ah iyo saamaynta hooska gradient ee gadaasha.
Sanadka 2007, aduunka intiisa kale, Doritos wuxuu noo soo bandhigay sawir cusub, aad uga casrisan oo is haysta.. Qaababka waa la cusboonaysiiyay, saddex xagalku waxa uu noqday koronto buluug ah, farta lagu qoray waxa lagu haayay qaab aan serif lahayn, dhibicda i waxa loo bedelay huruud.
Kadib dhowr waji oo isbedel ah oo ku yimi astaanta, saddex xagalku waa halkan inuu joogo. Naqshadaynta 2013, laga bilaabo Doritos waa midda sii socota ilaa maantadan la soo saaray baakadaha alaabteeda.
Summadan cusub, qaabka saddexagalka ahi waxa uu maraa indhaha xarfaha o, si sawirka loo siiyo awood dheeraad ah. The qaabka joomatari, waxa uu ka kooban yahay qaabayn aan caadi ahayn, ku dhammaatay dhibco oo midab leh oo leh midab liimi ah oo leh saameyn dhalaalaya.
Magaca summada, waxay sii waddaa ilaalinta wejiga nooca sans serif ah, oo leh kabka cad iyo saamaynta XNUMXD ee jilayaasha, taasoo siinaysa muuqaal horumarsan.
Sanadka 2019, calaamaddu waxay ahayd kacdoon suuqa ka jira, marka ay u soo dhowaanayso dadweynaha da'da yar, xubnaha jiilka Z. Sida aynu wada ognahay, inta badan jiilkani maaha kuwo aad ugu dhow calaamadaha, taas oo keentay Doritos in ay tirtirto sawirkooda oo ay ku dhejiyaan booskeeda qoraal muujinaya in calaamaddu ay jirto.
Ololahan, wuxuu rajaynayay in uu dadweynaha ugu dhow iyo jiilka cusub, aqoonso alaabtaada iyo sumadda iyada oo aan loo baahnayn in la arko astaanta.
Doritos wuxuu had iyo jeer yaqaanay sida loola qabsado isbeddelka sawirka, isagoo ixtiraamaya astaanta astaanta. Tani waxay sii caddaanaysaa markaad bilowdo isticmaalka qaabka saddexagalka naqshadahaaga. Midabada madow, caddaanka, casaanka iyo orange-ka ayaa ah astaanta astaantan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Maxay taariikhdu qarinaysaa astaanta Doritos
Sida loo sawiro Illustrator